CSB II Ranohira : lany ny tahirim-baksiny BCG | NewsMada
CSB II Ranohira : lany ny tahirim-baksiny BCG
Misy fahatapahany ny famatsiana ny tahirim-baksiny BCG miaro amin’ny tiberkilaozy ho an’ny CSB II ao Ranohira amin’izao fotoana izao. « Efa lany tanteraka ny fatra 40 farany sisa tavela tao », hoy ny dokotera misahana ny CSB II, Radesy Dauphin. Nandefa famandrihana tany Ihosy izy ireo, ny 9 marsa lasa teo, satria efa kely ny tahiry nefa nilaza ny tomponandraikitra fa tsy mbola tonga ny famatsiana hatramin’izao. Lany ny herinandro lasa teo ny tahiry 40 ka miandry izany ny zaza vao teraka hatramin’ny 11 volana tokony hatao BCG. Nanomboka ny volana marsa, nitarina amin’ny zaza 11 volana ny fanaovam-baksiny BCG raha vao teraka hatramin’ny 45 andro izany teo aloha.
Nisy zaza voan’ny fahalemena tampoka tao Ranohira tamin’ny fiandohan’ny taona teo, rehefa natao ny fitiliana tsy poliomelita no nahazo azy fa « tuberculose osseuse » satria samy voan’ny tiberkilaozy ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana akaiky iray. Nahavita ny vaksiny BCG ara-dalàna ilay zaza nefa mbola tratran’ny fahalemena ihany. Ny taona 2015, nahatratra 60% ny taham-pahavitan’ny vaksiny BCG, nisy koa ny fahatapahan’ny famatsiana ny volana janoary sy febroary 2015.
Maromaro koa ny olona voan’ny tiberkilaozy ao amin’ny toeram-pitrandrahana safira ao Ilakaka be sy Andohan’Ilakaka. Miasa mafy nefa tsy ampy sakafo ny mpitrandraka vato. Eo koa ireo efa tratran’ny aretina, saingy tsy mitsabo tena vokatry ny tsy fahampian’ny saran-dalana hanao ny fitsaboana ka mamindra amin’ny hafa. Betsaka koa ny fokontany sy kaominina lavitra CSB any amin’ny 90 km.